Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Pulmonary hypertension အဆုပ်-သွေးတိုး
Pulmonary hypertension အဆုပ်-သွေးတိုး
Sat, Apr 7, 2012 at 3:58 AM
Pulmonary Hypertension ရှိ-မရှိ ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ။
Pulmonary hypertension ဆိုတာ သွေးတိုးရောဂါတမျိုး ဖြစ်တယ်။ လူအများဖြစ်တဲ့ သွေးတိုးနဲ့တော့ မတူဘူး။ အဆုပ် နဲ့ နှလုံးရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းက သွေးလွှတ်ကြောတွေမှာ ရောဂါရနေတာဖြစ်တယ်။
အဆုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ အင်မတန်သေးငယ်လှတဲ့ Pulmonary arteries and capillaries အဆုပ်-သွေးကြောမျှဉ်လေးတွေ ကျဉ်းပြီး၊ ပိတ်မယ်၊ ပျက်စီးမယ်ဆိုတာကနေ စတယ်။ ကျဉ်းပြီး သွေးကောင်းကောင်းမလာနိုင်တာမို့ အဆုပ်က သွေး မဝတော့ဘူး။ သွေးလွှတ်ကြောလေးတွေမှာ ဖိအားတွေ များများလာတယ်။ တဆက်တည်း နှလုံးရဲ့ ညာဘက် အောက်အခန်းက လုပ်နေကြထက်ပိုပြီး အလုပ်လုပ်လာရတယ်။ ကြာတော့ ဒီနှလုံးနေရာလဲ အားနည်းလာတော့တယ်။
ဒီရောဂါက ဆိုးတဲ့ရောဂါဖြစ်တယ်။ ကြာရင် အသက်ဆုံးပါးတဲ့အထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ပျောက်သွားအောင်တော့ ကုမရပေမဲ့ ဆေးနဲ့နေရင် ခံစားရတာတွေ သက်သာပြီး လူနေမှုဘဝလည်း အများကြီးကောင်းမွန်းစေနိုင်တယ်။ ဖြစ်ကာစမှာ ရောဂါ-လက္ခဏာတွေက မသိသာလို့ လတွေ နှစ်တွေနေမှ အထဲမှာရောဂါရှိနေတာသိတတ်တယ်။
• Shortness of breath (Dyspnea) အသက်ရှူမဝဖြစ်မယ်။ အစပိုင်းမှာ အားစိုက်ရတာမျိုးလုပ်မှ ဖြစ်ပေမဲ့ ကြာရင် နားနေရင်းပါ အသက်ရှူမဝဖြစ်မယ်။
• Dizziness or fainting spells ခေါင်းမူးပြီး သတိမကောင်းဖြစ်မယ်၊ တခါတလေ Syncope သတိလက်လွတ် ဖြစ်သွားမယ်။
• Chest pressure or pain ရင်ပတ်မှာနာနေမယ်။
• Swelling (Edema) ခြေတွေ-လက်တွေရောင်မယ်။ Ascites ဗိုက်လည်းဖေါင်းလာမယ်။
• Bluish color (Cyanosis) မျက်နှာအရေပြား၊ ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းတေံ ပြာနေမယ်။
• Palpitations နှလုံးခုန်တာမြန်မယ်၊ ရင်တုန်မယ်။
1. Idiopathic pulmonary hypertension (IPH) ဘာလို့ဖြစ်မှန်မသိတဲ့ အဆုပ်-သွေးတိုး = အကြောင်းခံ ရှာမတွေ့ဘူး။ မျိုးဗီဇလား ထင်ရတယ်။
2. Secondary pulmonary hypertension အကြောင်းခံတခုခုကနေ ဖြစ်လာတဲ့ အဆုပ်-သွေးတိုး = အကြောင်းခံ တခုခုကြောင့် ဖြစ်ရတာ ပိုများတယ်။ အကြောင်းခံတွေကတော့ -
• Pulmonary emboli အဆုပ်ခဲသွေးခဲပိတ်ခြင်း၊
• Chronic obstructive pulmonary diseases နာတာရှည် အဆုပ်-ဆို့ပိတ်ရောဂါ၊ ဥပမာ Emphysema ရောဂါ၊
• Connective tissue disorders တွယ်ဆက်-တစ်ရှူး ရောဂါတခုခု ဥပမာ Scleroderma or Lupus
• Sleep apnea and other sleep disorders ညအိပ်မရရောဂါတချို့၊
• Congenital heart defects မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ၊ Eisenmenger syndrome (အိုက်ဆင်မင်ဂါ-ဆင်ဒရုမ်း) ဆိုတာ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါတခုဖြစ်တယ်။ နှလုံးအောက်ခန်း နှစ်ခုကြားမှာ အပေါက်ပါနေတာဖြစ်တယ်။ Ventricular septal defect (VSD) လို့ခေါ်တယ်။ ဒါကနေ အဆုပ်-သွေးတိုး ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။
• Sickle cell anemia (ဆစ်ကယ်လ်-ဆဲလ်) သွေးအားနည်းရောဂါ၊
• Cirrhosis) အသဲခြောက်ရောဂါ၊
• AIDS (အေ-အိုင်-ဒီ-အက်စ်) ရောဂါစု၊
• Pulmonary fibrosis အဆုပ်ထဲ တင်ရှူးတွေ အမာရွတ်လိုဖြစ်တဲ့ရောဂါ၊
• Left-sided heart failure နှလုံးရောဂါ (ဘယ်ဘက်ခြမ်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း)၊
• Higher altitudes အမြင့်မှာနေရခြင်း၊ ပေ ၈ဝဝဝ ကျော်မှာနေရသူတွေ၊ တောင်တက်သမားတွေ၊
• Cocaine (ကိုကိန်း) သုံးစွဲခြင်း။
အဆုပ်-သွေးတိုးဟာ လူမရွေးဘဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက်ကြီးရင် အကြောင်းခံတခုကနေဖြစ်တဲ့ အမျိုးအစား အဖြစ်များတယ်။ ငယ်သူတွေမှာ အကြောင်းခံ ရှာမရတာ အဖြစ်များကြတယ်။ အကြောင်းခံ ရှာမရတာမျိုးက အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ မိသားစုထဲ တယောက်မကဖြစ်တာလဲ တွေ့ရတယ်။
Complications နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်တာတွေ
• Right-sided heart failure (Cor Pulmonale) နှလုံး ညာဘက်ခြမ်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း၊
• Blood clots သွေးခဲဖြစ်လာခြင်း၊
• Arrhythmia နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်း၊
• Bleeding သွေးယိုခြင်း၊ ဥပမာ Hemoptysis ချောင်းဆိုးသွေးပါ။
Tests and diagnosis ရောဂါအခြေအနေ တိကျသေခြာအောင် စစ်ဆေးနည်းတွေလုပ်မယ်။
7. Perfusion lung scan
10. Open-lung biopsy
11. Genetic tests
Pulmonary hypertension classifications အဆင့်ခွဲခြင်း
Class I = ရောဂါသာရှိနေပေမဲ့ ရောဂါလက္ခဏာမပြသေး၊
Class II = အသက်ရှူမဝတာဖြစ်နေပြီ။ နားနေရင်းနဲ့ဖြစ်မယ်။
Class III = နားနေရင် ကိစ္စမရှိပေမဲ့ လှုတ်ရှားရင် ရောဂါလက္ခဏာတွေပြလာမယ်။
Class IV = နားနေရင်း ရောဂါလက္ခဏာတွေပြလာမယ်။
Treatments and drugs ဘယ်လိုဆေးကုသလဲ
ဆေးကုရတာ ရှုတ်ထွေးတယ်။ လူနာအတွက် အကောင်းဆုံးနည်း ရှာနေရတတ်တယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ မပြတ် ပြသနေရမယ်။
• Blood vessel dilators (Vasodilators) သွေးကြောကျယ်ဆေးများ = Epoprostenol (Flolan) ဆေးပေးရင် သက်သာတယ်။ အချိန်တိုသာ သက်ရောက်တယ်။ IV catheter ပိုက်ထဲကို ကိုယ်မှတပ်ထားတဲ့ Pump (ပန့်ပ်) ကနေ ဆေးသွင်းနေရတတ်တယ်။ မေးရိုးနာတာ၊ ပျို့၊ ဝမ်းပျက်၊ ကြွက်တက်၊ ဆေးထိုးတဲ့နေရာနာတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Iloprost (Ventavis) ၃ နာရီတခါ Nebulizer သုံးပြီး ရှူရတယ်။
• Endothelin receptor antagonists သွေးလွှတ်ကြောနံရံထဲက Endothelin ကိုသက်ရောက်စေပြီး ကျဉ်းမှာကို တားပေးတယ်။ အဲဒီဆေးမျိုးထဲက Bosentan (Tracleer) ဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မဟုတ်ရင် သုံးတယ်။ အသဲ ကောင်းနေမှ သုံးတယ်။
• Sildenafil (Revatio, Viagra) နဲ့ Tadalafil (Cialis, Adcirca) ဆေးတွေကို ယောက်ျား ပန်းသေ-ပန်းညှိုး အတွက် ဆေးတွေလို့ သိလာကြတယ်။ အမှန်က ဒီ အဆုပ်-သွေးတိုးရောဂါအတွက် သုံးနေခဲ့တဲ့ ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
• High-dose calcium channel blockers အမျိုးအစားဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Amlodipine (Norvasc), Diltiazem (Cardizem, Tiazac) နဲ့ Nifedipine (Adalat, Procardia) ကိုလဲသုံးတယ်။
• Ambrisentan (Letairis) ဆေးလဲသုံးတယ်။ အသဲကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။
• Anticoagulants သွေးမခဲဆေးတွေလဲ သုံးရတယ်။ Warfarin (Coumadin, Jantoven)
• Diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးတွေလဲ လိုနိုင်တယ်။
• Oxygen အောက်စီဂျင်ပေးဘို့လဲ လိုလာနိုင်တယ်။
• ဆေးနဲ့မထိန်းနိုင်သူတွေအတွက် ရှိတယ်။
• Atrial septostomy နှလုံး အထက်ခန်းနှစ်ခုကြားမှာ အပေါက်လေးဖေါက်ပေးတယ်။
• Transplantation အဆုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အဆုပ်နဲ့နှလုံးတွဲဖြစ်ဖြစ် အသားထိုးပေးနည်း။
Lifestyle and home remedies လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းရလိမ့်မယ်။ အိမ်မှာတင် ဆရာဝန်မလိုတဲ့နည်းတွေလဲ လိုက်နာရမယ်။
• ကိုယ်ဝန်လဲမဆောင်နဲ့၊ တားဆေးလဲမသောက်နဲ့။ ဟော်မုန်းမပါ တားနည်းသုံးနိုင်တယ်။
• လေယာဉ်ခရီးမသွားပါနဲ့။ တောင်မတက်နဲ့။ တောင်ပေါ်မနေနဲ့။
• သွေးဖိအားကျစေမှာရှောင်ပါ။ ဥပမာ Hot tub or Sauna ရေနွေးစိမ်-အပူငွေ့သုံး ရေချိုးတာ၊
• အစာအာဟာရ မျှတ လုံလောက်ပါစေ။ ကိုယ်အလေးချိန်ချပါ။